Jenaraal Xuud oo 48 saacadood u qabtay in Mas’uuliyiinta Hirshabeelle uga baxaan Beledweyne - Awdinle Online
Jenaraal Xuud oo 48 saacadood u qabtay in Mas’uuliyiinta Hirshabeelle uga baxaan Beledweyne
Hoggaamiyaha Golaha Kacdoonka gobolka Hiiraan Jenaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa u qabtay 48 saacadood gudahood iney uga baxaan magaalada Baledweyne masuuliyiinta maamulka Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Baledweyne.
Jenaraal Abuukar Xuud ayaa sheegay ineysan u dulqaadan doonin dhibaatoyinka Hirshabeelle ee ka geysanayaan magaalada Baledweyne oo ah xariga dadka shacabka ah iyo amaan darada aay magaalada kusoo kordhiyeen, waa sida uu hadalka u dhigaye Janeraalka.
Jenaraal Abuukar Xuud ayaa sidoo kale fariin adag u diray dowlada Soomaaliya oo uu sheegay iney beegsi ku haayso Sarakiisha Xooga dalka ee u dhashay gobolkan oo aay marwalbo badalaan waxuuna ugu baaqay in arintaasi dowlada ka waantowdo oo ay dib ugu soo celiso Sarakiisha aay gobolka ka badashay.
Hadalka Jenaraal Xuud ayaa imaanaya xili maanta fariisinka Golaha Kacdoonka Hiiraan aay gaareen boqolaal dadweyne ah oo isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo taageero balaaran u muujiyay dhaqdhaqaaqa Kacdoonka Jenaraal Xuud uu hoggaaminaayo.
Previous articleJubbaland oo markale shuruud ku xirtay ka qeyb-galka doorashada Soomaaliya
Next articleKenya oo cadeysay mowqifkeeda Go’aankii Maxkamadda ICJ ee dacwadda badda